Ezaka fampandrosoana maharitra 36 an'ny indostrian'ny lamaody amin'ny aprily 2021
Tamin'ny volana aprily, ny indostrian'ny lamaody dia nanohy nanao ezaka fampandrosoana maharitra, indrindra ny marika kiraro fanatanjahan-tena, toa ny Adidas, Asics, Andriamatoa Porter ary marika hafa. Nandritra ny famoahana fitaovana vaovao, dia nanandrana ny farany vitany ihany koa izy ireo. Ireo fitaovana manavao ireo dia mora ampiasaina amin'ny tontolo iainana ....
Gen Z dia mahazo fandrosoana maharitra amin'ny fifandanjana TikTok #Thrifthaul sy Fast Fashion #Sheinhaul
Moa ve isika mahita fiovan'ny lamaody maharitra? Sahirana amin'ny fikarohana teknika lamaody mandritra ny areti-mandringana ny tanora sy ny tanora mahatsiaro geo mba hahatonga ny tontolo iainana ho lamaody sy lamaody. Nanampy tamin'ny fampiroboroboana ny sehatra fivarotana akanjo indray izy ireo (toy ny Vint sy Depop) ary ny ...
Tsy misy toa akanjo vaovao mihitsy, sa tsy izany? Azo antoka fa tia azy ireo ny UK. Araka ny tatitra nataon'ny Komitin'ny Fanaraha-maso ny tontolo iainana (EAC), mandany akanjo dimy heny mihoatra ny tamin'ny 1980 i UK. Izany dia mihoatra ny firenena hafa rehetra any Eropa ary manodidina ny 26.7kgs isaky ny ...
Mpamatsy ara-dalàna an'ny Disney sy NBCU
Rehefa avy niasa mafy sy niomana hatrany izahay dia nandalo ny fanaraha-maso Disney sy NBCU ny volana mey 2019, miaraka amin'ny FAMA manan-kery lasa mpamatsy fahefana an'i Disney izahay, ary koa NBCU. Amin'ny maha marika fanta-daza azy izay manome akanjo sy kojakoja azo antoka sy azo antoka, Disney sy NBCU dia nitaky fepetra ambony ...
Ny ekolojia ny fanodinana mahomby lamaody
Tamin'ny taon-dasa, ny H&M dia nanomboka ny vokatra lamaody "close the loop" voalohany, izay vita amin'ny akanjo vita fanodinana. Ny orinasa koa dia mikendry ny hampitombo ny famokarana akanjo toy izany amin'ny 300 isan-jato amin'ny faran'ity taona ity. Raha 95 isan-jaton'ny akanjo nariana dia azo averina ...